Ogaden News Agency (ONA) – Fidel Castro oo Geeriyooday & Taariikhdii Madoobay ee uu Kaga Tagay Dhulka Soomaalida Ogadenya.
Fidel Castro oo Geeriyooday & Taariikhdii Madoobay ee uu Kaga Tagay Dhulka Soomaalida Ogadenya.
Posted by ONA Admin	/ November 27, 2016
Waxaa geeriyooday Hogaamiyihii Shuuciga ahaa ee wadanka Cuba kasoo talinayay mudada 50-ka sano ah Fidel Castro.
Geerida Kaligii Taliye Fidel Castro waxay xasuus xanuun iyo murugo badan xambaarsan dareensiisay shacabka Soomaalida Ogadenya oo taariikh madaw uu kaga tagay Kaligii taliyahan shuuciga ahaa ee geeriyooday.
Dagaalkii taariikhiga ahaa ee loo yaqaanay ” The Ogaden War” ee sanadkii 1977-kii ka dhacay wadanka Ogadenya wuxuu Fidel Castro iyo isbahaysigii shuuciyada ay ku soo xad gudbeen ciida Soomaalida Ogadenya iyagoo garab siinaya Gumaysiga Itoobiya oo guul darradii lasoo daristay awgeed u qaylyadan dhamaan wixii shuuciyad aduunka ka jirtay xilligaas oo uu hormuud u ahaa Fidel Castro.
Mujaahidiinta Soomaaliyeed ayaa cashiro lama ilaawaan ah u dhigay ciidanka Cuba oo Soomaalidu ay ugu yeedhi jirtay ” Kuuba Naas Dheer”. Sida laga soo xiganayo Naftood-hureyaashii dagaalkaas lagalay ciidanka huwanta ah ee Shuuciyada waxay ahaayeen ciidanka Cuba ee dagaalkaas kasoo qaybgalay 15,000 oo askari.
Fidel Castro wuxuu booqasho ku tagay dalka Ogadenya gaar ahaan magaalada Jigjiga sanadkii 1981-dii. Ciidankii Cuba ee wadanka Ogadenya yimid ayaa khasaare laxaad leh uu kasoo gaadhay. Taariikhdaas madaw ee uu baday Fidel Castro shacabka Soomaalida Ogadenya ayaa geeridiisu ay boog hore markale soo xasuusisay.
Waxaa kaloo manta ilaahay loogu xamdiyayaa inuusan dagaalkii Ogadenya ku joogsanin gormadkii dulmiga iyo gardarada ahaa ee Kuuba Naas-Dheer ay usoo gurmatay Ciidankii Gumaysiga Itoobiya ee jabku iyo naasa-beelku uu ka raacay dagaalkii Ogadenya ee 1977-1978 dii.